ဆိုလာပြားတွေကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ကြမလဲ? | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
ဆိုလာပြားတွေကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ကြမလဲ?
လတ်တလောမှာ ဆိုလာပြားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူပြောများလာကြပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးမပြုမီ သေချာသိထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အရင်က ဆိုလာပြားတွေကို မြို့ပြတွေက အသုံးပြုနည်းပေမယ့် ကျေးလက်ဒေသနဲ့ နယ်ဘက်တွေမှာပဲ အသုံးများပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း မြို့ပြတော်တော်များများမှာ လျှပ်စစ်မီးက မလာတာများတဲ့အတွက် ဆိုလာပြားတွေကို ဈေးကြီးပေမယ့် အိမ်တိုင်းလိုလို တပ်ဆင်လာကြပါတယ်။ ဆိုလာပြားတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ပေမယ့် ပြုပြင်စရိတ်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းက ပိုမှန်ထပ်များတာကို သိထားရပါမယ်။
ဆိုလာပြားကို ၁၈၀၀ နှောင်းပိုင်းကတည်းက သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ပြီး ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ နေစွမ်းအင်ကနေ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လည်ပတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက အေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာ နေရောင်ခြည်အားနည်းလို့ ဆိုလာပြားတွေအတွက် မကောင်းဘူးလို့ တွေးကြပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီအတွေးက မှားပါတယ်။ ဆိုလာပြားတွေက အရမ်းပူတဲ့ရာသီတွေမှာဆို အပူလွန်ကဲပြီး မီးလောင်မှုကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလာပြားတွေကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဆိုလာပြား ဘာကြောင့် မီးလောင်ရတာလဲ
ဆိုလာပြားမှ တစ်ဆင့် မီးလောင်မှုအချို့က ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဆိုလာပြားကို အားသွင်းတဲ့နေရာမှာ အဓိက အရေးပါပါတယ်။ ဆိုလာဘက်ထရီ အားပြည့်ခါနီးနဲ့ ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာ လျှပ်စီးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ Charge Controller လို့ခေါ်တဲ့ ကိရိယာမတပ်ထားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဆိုလာပြားကနေထွက်တဲ့ ကြိုးကို သင့်တော်တဲ့ကြိုးမသုံးခြင်း၊ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ ကြေးကြိုးမသုံးခြင်း၊ ဆိုလာပြားရဲ့ ဝါယာကြိုးပေါက်နေခြင်း၊ ဆိုလာပြားကို ခေါင်မိုးပေါ်ထားတဲ့အခါ သေချာစွာ တပ်ဆင်တုပ်နှောင်ခြင်း မပြုမိဘဲ ဘက်ထရီရော ဆိုလာပြားအနောက်မှာပါ အပေါင်း၊ အနုတ်ငုတ်မှာ ကြိုးချောင်နေခြင်း၊ ကြိုးဆက်ထားတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ သေသေသပ်သပ်မဆက်ထားတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုလာပြား မီးမလောင်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
အဓိကအနေနဲ့ Charge Controller ကိုခံသုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ ဝါယာကြိုးကို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပြီး အိမ်မှာလူမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ Controller သို့မဟုတ် Breaker Main ကို ပိတ်ထားပါ။ နေအရမ်းပူတဲ့ နေ့တွေမှာ ဆိုလာပြားနဲ့ ဘက်ထရီကြားက ဝါယာကြိုးတွေ အပူမလွန်ကဲစေဖို့ သေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆိုလာပြားတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းက ပုံမှန်ထပ်များပေမယ့် အကြမ်းခံပြီး နှစ်ရှည်အသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် ဝယ်ရကျိုးနပ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆိုလာပြားတွေကို အားသွင်းတဲ့အခါမှာ သေချာစေ့စပ်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။